Firefox 96 inouya nekudzikisa ruzha, kurambidzwa kwecookie uye nezvimwe | Linux Addicts
Kuvhurwa kweiyo vhezheni nyowani yeakakurumbira web browser "Firefox 96" yakaziviswa umo isu tinogona kuwana kuti iyo kugona kumanikidzira kuisirwa kwerima kana madingindira akareruka zvemasayiti. Iyo color scheme inoshanduka nebrowser masimba uye haidi tsigiro yesaiti, ichibvumira rima dingindira kuti rishandiswe pamasaiti anongowanikwa mune akajeka mavara uye mwenje dingindira panzvimbo dzakasviba.
Kushandura kumiririra kwemavara mune zvaunofarira (zve: zvido) muchikamu "Zvakawanda / Mutauro uye chitarisiko", chikamu chitsva "Mavara" chakatsanangurwa, kwaunokwanisa kugonesa kutsanangurwa patsva kwemavara zvine chekuita neiyo inoshanda sisitimu yeruvara chirongwa kana kugovera mavara nemaoko.
Imwe shanduko inoratidzwa mune iyi vhezheni itsva yeFirefox 96 ndeye kudzikisira ruzha yakanyanya kunatsiridza otomatiki odhiyo kuwana kutonga, pamwe nekuvandudza zvishoma echo kudzima.
Tambien chirambidzo chakasimba chakaiswa pakuendesa makuki pakati pesaiti, iyo inorambidza kugadziridzwa kweyechitatu-bato makuki akaiswa paunenge uchiwana masaiti kunze kweiyo dura reizvino peji. Aya makuki anoshandiswa kuteedzera mafambiro evashandisi pakati pemasaiti mune kodhi yekushambadzira network, social media widget, uye web analytics system.
Dzimwe shanduko izvo zvinosanganisira:
Yakagadziriswa nyaya nemhando yevhidhiyo inodzikira pane mamwe masaiti uye SSRC (sync source identifier) ​​header reset kana uchiona vhidhiyo.
Isu takagadzirisawo nyaya ine yakaderedzwa resolution kana tichigovana skrini kuburikidza neWebRTC.
PamacOS, kutevera zvinongedzo muGmail zvino kunovhura iwo mune nyowani tebhu, senge pane mamwe mapuratifomu. Nekuda kwenyaya dzisina kugadziriswa, macOS haitsigire kuburitsa mavhidhiyo mune yakazara skrini modhi.
Kurerutsa kugadzirisa kweakasviba theme masitaera, itsva CSS chivako ruvara chirongwa chakawedzerwa, icho chinokutendera kuti uone kuti ndeupi ruvara zvirongwa chinhu chinogona kuratidzwa nenzira kwayo.
Yakawedzera hwb () CSS basa rinogona kutsanangurwa pachinzvimbo chemavara kukosha kutsanangura mavara anoenderana neHWB color modhi (hue, kuchena, kusviba).
Mutoro pashinda huru yekuuraya wakaderedzwa zvakanyanya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Firefox 96 inouya nekudzikisa ruzha, kurambidzwa kwecookie uye nezvimwe
Signal CEO Akasiya chigaro uye WhatsApp Co-Muvambi Akagadzwa Mutungamiriri Mukuru